Shan waxyaabood oo uu caan ku yahay gobolka ay dirirtu ka socoto ee Tigray - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Shan waxyaabood oo uu caan ku yahay gobolka ay dirirtu ka socoto ee Tigray
November 22, 2020 at 20:10 Shan waxyaabood oo uu caan ku yahay gobolka ay dirirtu ka socoto ee Tigray2020-11-22T20:10:08+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Colaadda Gobolka tigray ayaa gashay Toddobaadkii Saddexaad iyadoo uu dagaalka horseeday khasaare naf iyo maalba leh. Gulufkaan oo dhaxeeya dowladda Federaalka ah ee Itoobiya iyo xoogagga TPLF ayaa waxaa ku barakacay kummanaan shacb ah, kuwaasi haatan gaaray dalkaasi Suudaan.
1. Boqortooyadii Aksum ayaa waxaa xudun u ahaa gobolkan. Waxaa lagu sifeeyey mid ka mid ah ilbaxyadii ugu waaweynaa ee horay u soo maray dunida. waxay mar ahayd dowladdii ugu xoogga badneyd ee u dhexaysay boqortooyooyinkii Roomaanka iyo Beershiya.
2. Burburka magaalada Aksum haatan waa goob UN Heritage ay leedahay. Goobta, oo ka bilaabmaysa inta udhaxeysa Qarnigii 1aad iyo kii 13aad ee AD, waxaa ku yaal dhismayaal waaweyn, qalcado, qabriyo boqortooyo iyo kaniisad.
3. Inta badan dadka ku dhaqan gobolka Tigray waa masiixiyiin haysta madhabta Orthodox-ka ee Itoobiya.. Diinta masiixiga ayaa gobolka Tigray lagu beeray 1600 oo sannadood ka hor.
5. Sisinta waa dalagga ugu muhiimsan ee ka baxa gobolka, Waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Shiinaha iyo waddamo kale.
« Somalia: Implementation of Women Quotas in Indirect Electoral System Based on Clan
TOBAN Xiddig Oo Arsenal Ah Oo Bar-Baro Ku Dhaafi Waayay Leeds United. »
Al-Shabaab raid military base in Mudug, deaths reported